မွန်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ဆားကွင်းများမှာ လယ်ယာမြေများဖြစ်နေသည့် အတွက် ဆားကွင်းနေရာ ရရှိရန်ြ?? - Yangon Media Group
မော်လမြိုင်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၄
မွန် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဆားကွင်းများသည် လယ်ယာမြေများဖြစ်နေသည့်အတွက်ဆားကွင်းနေရာရရှိရန် ပြည်နယ်အစိုးရထံတင်ပြ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မွန်ပြည်နယ်ဆားလုပ်ငန်းရှင်အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးထိန်ဝင်းက ပြောကြားသည်။ မော်လမြိုင်မြို့၊ ဈေးကြိုရပ်၊ နီလာလမ်း၊ ဈေးကြိုပွဲရုံတန်း၌ ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီကကျင်းပသော မွန်ပြည်နယ် ဆားလုပ်ငန်းရှင်အသင်းဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲနှင့် ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲအခမ်း အနားတွင် ယင်းသို့ပြောကြားခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
အခမ်းအနားတွင် မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမင်းကြည်ဝင်း၊ မွန်ပြည်နယ်ဆားလုပ်ငန်းဦးစီးမှူး ဦးခင်စိုး၊ မွန်ပြည်နယ်စားသုံးသူ ရေးရာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိုးသန်းအေးနှင့် မွန်ပြည်နယ်ဆားလုပ်ငန်းအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးထိန်ဝင်းတို့က အမှာစကားပြောကြား ကြသည်။ “မွန်ပြည်နယ်ဆားလုပ်ငန်း ရှင်အသင်းဖွဲ့ပြီးရင် မွန်ပြည်နယ်ဆားချော ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရပါမယ်။ ဆားမထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့နေရာတွေ မှာ ဆားပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ ကျွန် တော်တို့ ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပါမယ်။ ပြီးတော့ ဆားတောင်သူတွေ လိုအပ်နေတဲ့ အသေးစားချေးငွေ တွေရရှိအောင် ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်သလို လက်ရှိမွန်ပြည်နယ်မှာ ရှိနေတဲ့ဆားကွင်းတွေဟာ လယ် ယာမြေတွေပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဆားကွင်းနေရာကို မွန်ပြည်နယ် အစိုးရကိုတင်ပြပြီး ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်း အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။
ဆားဈေးတွေ ဆက်တိုက်ကောင်းလာတဲ့အတွက် ဆားထုတ်လုပ်တဲ့ တောင်သူတွေလည်း ဆားထုတ်လုပ်ဖို့အားစိုက်လာကြတယ်”ဟု မွန်ပြည်နယ်ဆားလုပ်ငန်းရှင်အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးထိန်ဝင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။၂၀ဝ၈ ခုနှစ် နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဆားကွင်းများပျက်စီးသွားခဲ့ပြီး ဆားထုတ်လုပ်မှု မြေဧက ၅၀ဝ၀ ကျော်အနက် မြေဧက ၂၉၀ဝ ခန့် တွင်သာ ဆားထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။
ရှေးကျသော မော်တော်ကား ပုံစံငယ်များ၊ ကားပုံစံငယ်များနှင့် သင်္ဘောပုံစံငယ်များကို စုစည်းပြီး
အင်္ဂလန်နှင့် ပွဲက ခက်ခဲမည်ကို ကိုလံဘီယာ မျှော်လင့်ထား
”ကျွန်မတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အခုလိုမျိုး ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံရ??
ကော့သောင်းတွင် တိုက်ခန်းထဲ သော့တုဖြင့်ဝင်ပြီး အနုကြမ်းစီးသူကို ဖမ်းမိပြီ
”ဒုဋ္ဌဝတီကိုလွန်၍”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် တစ်ပတ်ကြာ ရုံတင်ပြသခွင့်ရရှိ